Paul Pogba Oo Taageero Layaableh U Muujiyay Goolhayaha Dhibaataysan Ee Gianluigi Donnarumma Oo Colaad Xumi Dhex Marayso Jamaahiirtiisa AC Milan. - Laacib.net
Xidiga xulka qaranka France iyo kooxda Manchester United ee Paul Pogba ayaa kubbada cagta aduunka ugu baaqay in ixtiraam wayn loo muujiyo isla markaana si fiican loola dhaqmo goolhayaha xaaladu ku xun tahay ee Gianluigi Donnarumma kaas oo saxaafada ka sheegay in aanu wax heshiis ah u saxiixi doonin kooxdii soo saartay ee AC Milan.
Jamaahiirta xulka qaranka Talyaaniga ayaa lacag faalsho been abuur ah oo laga sameeyay dollar waxay dusha ugaga shubeen goolka uu xulka qarankooda da’yarta ah ee Italy uu ugu jiray Gianluigi Donnarumma ee kulankii xalay waxayna ku muujinayeen in uu hunguri dartiis u diiday in uu AC Milan oo ka dhigtay ciyaartoyga uu yahay uu heshiis cusub u saxiixo.
Laakiin xidiga aduunka ugu qaalisan ee Paul Pogba ayaa difaacay Gianluigi Donnarumma wuxuuna sheegay in dhawaan uu noqon doono goolhayaha aduunka ugu fiican isla markanaa uu u qalmo in ugu yaraan lagu ixtiraamo wixii uu haddaba soo qabtay.
Wakiilka Gianluigi Donnarumma ee Mino Raiola iyo maamulka sarre ee AC Milan ayaa si xun iskugu khilaafay arintan waxayna noqotay mid ka mid ah wararka ugu badan ee suuqa kala iibsiga iyo waliba kubbada cagta aduunka loogu hadal haynta badan yahay iyada oo 18 jirkan ree Talyaani ee Gianluigi Donnarumma lagu eedeeyay in uu wakiilkiisa raacay oo uu dhabarka ka toogtay AC Milan.
Si kastaba ha ahaatee ugu yaraan Gianluigi Donnarumma ayaa taageero layaableh ka helay Paul Pogba wuxuuna xidiga ree France bartiisa twitterka uu ku soo qaray: “Donnarumma waxa uu si deg deg ah u noqon doonaa ka aduunka ugu fiican, waxa uu kaliya ee uu u qalmaa waa ixtiraam dhamaan wixii uu ilaa hadda soo qabtay”.
Paul Pogba iyo Gianluigi Donnarumma ayaa wadaaga wakiilka Mino Raiola kaas oo ka mid noqday ragga suuqa kala iibsiga ugu saamaynta badan isla markaana Paul Pogba dib ugu soo celiyay Manchester United kadib wada xaajoodyo lagu daalay oo waqti dheer socday.